What is a broker note - NOTE BROKERING & INVESTING
By Note Broker On May 16, 2021
Why do people get a broker?
1: mid u shaqeeya dhex dhexaadnimo: sida. ah: wakiilka abaabula guurka. b: wakiil ka gorgortama qandaraasyada iibka iyo iibka (sida hantida ma guurtada ah, badeecadaha, ama damaanada)
Dullaaliintu waa wakiilo ma guurtada ah oo dhammeystiray tababbarka dheeraadka ah iyo shuruudaha rukhsadda. Hantiile waa shirkad shati sharciyeysan ama dallaal (ama xirfadle kale oo dhisme ah) oo xubin ka ah Ururka Qaranka ee Hantilayaasha (NAR).
Xalka. Dilaalku waa xubin ka mid ah sarrifka saamiyada kaas oo shati u haysta sarrifka saamiyada si uu u iibsado ama u iibiyo dammaanadaha isagoo ka wakiil ah macmiilkiisa.
Dilaal waa shaqsi ama shirkad u shaqeysa sidii dhex dhexaadiye u dhexeeya maal-galiye iyo isweydaarsiga dammaanadaha. … Dullaaliinta qiimo dhimista waxay ku fuliyaan meherado ayagoo matalaya macmiil, laakiin caadi ahaan ma bixiyaan talo bixin maalgashi. Dilaaliinta adeegga buuxa waxay bixiyaan adeegyo fulineed iyo sidoo kale talobixin maalgashi oo ku habboon iyo xallinta.
Waxay kugula barbar dhigi karaan amaahiyeyaal iyo alaabooyin kala duwan Adigu waqtiga kaliya ma badbaadin doontid iskana ilaali jaahwareerka laakiin waxaad fursad fiican u heli doontaa inaad hesho dulsaar badan. Adiga oo dallaal ah, kaliya uma badna inaad heshiis fiican ka heli doontid, sidoo kale waxaad u badan tahay inaad ku hesho ‘haa' arjigaaga amaahda guriga.
Xaaladaha badankood, dilaaliinta amaahda ayaa la siiyaa guddi horudhac ah iyo raad raac ama guddi socda oo ku saabsan ganacsiga ay bangiga keenaan. Guddiyadan waxaa la bixiyaa oo keliya marka deynta gurigaagu degto. Guddiyada laftoodu waxay ku saleysan yihiin boqolkiiba inta amaahda iyo LVR.
Dillaaliinta. Dilaalku waa dhexdhexaadiye u dhexeeya macaamiisha iyo soo saarayaasha (adeegyada). Waxaa jira dallaaliin ku jira caymiska, guryaha, iibinta gawaarida, iwm. …
Dilaaliinta internetka. Nooc cusub oo maalgashi dijitaal ah oo macaamilka kula macaamila internetka. …
Dullaaliinta qiimo dhimista. …
Dillaaliinta adeegga buuxa. …
Dillaaliinta saamiyada. …
Dilaalinta amaahda. …
Kireynta dallaalnimada. …
Dillaaliinta Forex. …
ku celi wakiilka
dillaal daacad ah dilaal dilaal ah
Suuqyada saamiyada ee Hindiya waxaa xukuma qodobbada Sharciga Amniga iyo Is-dhaafsiga ee Hindiya, 1992. Dilaalku wuxuu galayaa ganacsiyo is-weydaarsi ah koontadiisa ama wakiilkiisa macaamiishiisa. … Dullaaliintu waxay la macaamilaan suuqyada labaad iibka iyo iibsashada dammaanadaha sida saamiyada iyo curaarta.
Dilaalku waa qof ama shirkad abaabusha macaamil u dhexeeya iibsadaha iyo iibiyaha guddi marka heshiiska la fulinayo. Dilaal sidoo kale u dhaqma sidii iibiyaha ama iibsade wuxuu noqonayaa qayb muhiim ah heshiiska.
Kuwa bilowga ah, dallaaliinta guryaha ka shaqeeya ayaa lacag ka badan celcelis ahaan ka sameeya wakiillada. Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka, celceliska mushaharka dillaaliinta guryaha waa $ 75,910. Si tan loo dhigo, celceliska mushaarka wakiilka guryaha waa $ 59,630 – taasi waa boqolkiiba 20 ka hooseeya.
Ahaanshaha wakiilka guryaha ‘Real Estate Agent' noqoshada guuleyste iyo sameynta dakhli waara sida wakiilka guryaha ama dallaalku waa shaqo adag iyo, xaaladaha badankood, waxay ubaahantahay ballanqaad ballaaran oo waqti, dadaal, iyo xitaa lacag ah.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Shaqada iyo Tirakoobka, mushaharka dhexdhexaadka guryaha ee dhexdhexaadka ah ee Mareykanka waa $ 78,940. Illinois waxay ku hogaamisaa dalka mushaharka ugu badan ee dhexdhexaadiyaasha guryaha dilaaga ah ee 2018 oo ah $ 103,430.